BAZ Inopa Marezenisi Makambani Akarerekera kuZanu PF?
Mbudzi 20, 2020
Broadcasting Authority Of Zimbabwe 3
Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ) yapa marezenisi eterevhizheni matanhatu kumakambani anosanganisira Zimpapers neDaily News nemamwe makambani anonzi akarerekera kuZanu PF.
Sachigaro weBAZ, VaCharles Manzi Sibanda, vati vakabvunzurudza makambani gumi nemana uye makambani anotevera ndiwo apihwa marezenisi.
Jester Media (Pvt) Ltd iyo inenge ine terevhizheni inonzi 3K TV; Zimbabwe Newspapers (1980) iyo inenge ichinzi ZTN; Rusununguko Media iyo ine NRTV; Acacia Media Group inenge iine terevhizheni inonzi Kumba TV; Fairtalk Communications iyo inenge iine terevhizheni inonzi Ke Yona TV pamwe neChannel Dzimbabwe inenge iine terevhizheni inonzi Channel D.
VaSibanda vati makambani aya anofanira kuenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemisere.
Mukuru weFairtalk Communications, VaQubani Moyo, avo vanova zvakare komishina weZimbabwe Electoral Commmission, vaudza Studio7 kuti vafara zvikuru nekuwana kwavaita rezenenisi vachiti terevhizheni yavo ye Ke Yona TV ichaenda pamhepo mekukati memwedzi gumi nemviri.
Ke Yona TV inenge ine muzinda wayo muBulawayo.
Asi vamwe vanoona nezvenhau varatidza kusafara nezvaitwa neBAZ vachiti makambani ese apihwa marezenesi akarerekera kubato riri kutonga reZanu PF.
Mukuru weMISA Zimbabwe, VaTabani Moyo, vaudza Studio7 kuti hapana chashanduka panyaya dzekutepfenyura pateverevhizheni vachiti hurumende yapa marezenesi kumakambani ayo nemadzisahwira ayo.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira, Sofia Mapuranga ndemumwe asina kufara nezvaitwa neBAZ achiti makambani ese apihwa marezenisi akangofanana neZimbabwe Broadcasting Corpration.
Zimpapers ikambani yehurumende sezvakaita Zimbabwe Broadcasting Corporation, Channel Dzimbabwe ine vakuru vanosanganisira vaimbove mukuru weZBC, VaHappison Muchechetere. Vamwe vanonzi vari muChannel Dzimbabwe ndiHazel Masvanhise naTariro Makanga, ukuwo Acacia Media Group ichinzi ikambani yaSharon Mugabe.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko, VaSettlement Chikwinya, vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichabvunzurudza kuti BAZ yakazvifambisa sei vachiti makambai ese apihwa marezenisi akarekera divi rimwe.
Vatiwo zvaitwa nhasi dzozvakaitika apo pakapihwa marezenisi emaredhiyo.
Mamwe makambani akakundikana kuwana marezenisi anosanganisira Heart and Soul TV yaTrevor Ncube vanove chipangamazano wemutungamiriri wenyika,pamwe neAB Communications inove kambani yenhengo ZANU PF zvakare vari mumiriri weNyanga North muNational Assembly, VaSupa Mandiwanzira.
Zimbabwe yange iine terevizheni imwe chete yeZimbabwe Broadcasting Corporation iyo veruzhinji vanochema kuti yakarekera kubato riri kutonga reZanu PF.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende payanya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo.
Hatinawo kukwanisa kunzwa divi reZanu PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwwemashoko mubato iri, VaTafadzwa Mugwadi, vange vasiri kudaira nharembozha yavo.